Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4.3 tijaabo Qiyaasidda
Waxaan qiyaasi karaa tijaabo in aynaan samayn karo. Laba waji in si gaar ah ay ka faa'iideystaan ​​da'da digital waxaa habboon iyo tijaabo dabiiciga ah.
su'aalaha sayniska iyo siyaasad badan oo muhiim u yihiin sababaha. Aynu ka fiirsan, tusaale ahaan, su'aasha soo socda: Waa maxay saamaynta barnaamij shaqo tababar ku saabsan mushaharka? Mid ka mid ah habka aad uga jawaabtid su'aashan la tijaabo nasiibin gacanta halkaasoo shaqaaluhu ay kala sooc lahayn loo xilsaaray in ay ama tababarka ay helaan ama ma helaan tababar u noqon lahaa. Markaas, cilmi qiyaaso yaabaa saamaynta tababarka ka qaybgalayaasha, kuwaas oo ay si fudud u barbar mushahaarada dadka helay tababarka kuwa ayey u helin.
Isbarbar fudud waa ansax ah sababta oo ah wax ay taasi dhacdo ka hor xogta la soo ururiyay xitaa: randomization ah. Aan randomization, dhibaatada waa badan duwantahay. cilmi-A barbardhigi karin mushaharka dadka si iskood ah u saxiixay ilaa tababarka kuwa ma-qorto. isbarbardhigga Taasi malaha tusi lahaa in dadka helay tababar dheeraad ah oo ku kasbatay, laakiin sida badan waxaa weeye sababta oo ah tababarka iyo inta of this waxaa ugu wacan in dadka is-tababarka waxaa laga kuwii ha saxiixin-up for tababar oo kala duwan? In si kale loo dhigo, waa cadaalad ah inay is barbar dhigaan, mushahaarada labadan koox dad ah?
Tani waxay walaac ku saabsan barbardhigo cadaalad keenaysaa cilmi qaar ka mid ah in ay aaminsan yihiin in ay tahay wax aan macquul aheyn in la sameeyo qiyaas sababaha aan ordaya tijaabo ah. sheegasho waxa uu aad uga fog yahay. Iyadoo ay run tahay in tijaabo bixiyaan cadaymaha ugu culus ee ugu saamaynta sababaha, waxaa jira xeelado kale oo ku siin kara qiyaasta sababaha qiimo leh. Halkii fikirka waa mid fudud (in ay dhacdo tijaabo) ama aan macquul aheyn in qiyaasaha sababaha (in kiiska ka mid ah lahaayeen arkay data), waxa fiican in aad u malaynayso in xeelado u samaynta qiyaasaha sababaha been weheliyaan taxanaha ah ka ugu adag in liita (Jaantuska 2.4). Dhamaadka ugu adag ee taxanaha ah waxaa nasiibin tijaabo gacanta. Laakiin, kuwaas oo inta badan waa adag tahay in la sameeyo cilmi bulsho, maxaa yeelay daaweynta badan oo u baahan xaddi aan waaqici ahayn iskaashiga ka dawladaha ama shirkadaha; arrin si fudud waxaa jira tijaabooyinka badan oo aynaan samayn karo. Sooci doontaa oo dhan Cutubka 4aad labada liito iyo of tijaabo nasiibin gacanta, iyo waxaan ku doodi doonaa in xaaladaha qaarkood, waxaa jira sababo xoog anshaxa inay door bidaan inay dheehidda hababka tijaabo.
Jaantuska 2.4: sii xeelado cilmi saamaynta sababaha qiyaasay.
Lyadoo ku teedsan taxanaha, waxaa jira xaalado ay cilmi aan si cad nasiibin. Taasi waa, cilmi-isku dayayaan in ay wax ku bartaan aqoonta tijaabo-sida aan si dhab ah sameeyaan tijaabo ah; dabiici ah, tani waxaa ay noqon doontaa adag, laakiin xogta weyn si weyn u hagaajin karaa awooddii uu si aan u qiyaaso sababaha xaaladahan.
Mararka qaarkood waxaa jira goobaha ay nasiibka adduunka dhacdo in la abuuro wax u eg tijaabo ah oo loogu talogalay cilmi. Naqshado waxaa lagu magacaabaa tijaabo dabiiciga ah, oo iyaga waa la tixgelin doonaa si faahfaahsan Qeybta 2.4.3.1. Laba muuqaalada ilo-ay xogta weyn dabiiciga had-on iyo size-aad iyo aad buu kor awoodda aan u leenahay in ay ka tijaabo dabiiciga bartaan marka ay dhacaan.
Lyadoo loo sii ka tijaabo nasiibin gacanta ku marti, mararka qaarkood ma jiro xitaa dhacdo ee dabiiciga ah oo aan isticmaali karno si ay u qiyaasaan tijaabo dabiiciga ah. In goobaha, waxaan si taxadir leh loo dhiso karo barbardhigo xogta aan tijaabo gudahood isku dayaya in ay qiyaasaan tijaabo ah. Naqshado waxaa lagu magacaabaa ku habboon, oo iyaga waa la tixgelin doonaa si faahfaahsan Qeybta 2.4.3.2. Like tijaabo dabiiciga ah, ku habboon waa design ah in sidoo kale faa'iido laga helay ilo xog weyn. Gaar ahaan, size-labadaba weyn marka la eego tirada kiisaska iyo nooca macluumaadka per kiis-aad bay u fududeeyaa ku habboon. Farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya tijaabo dabiiciga ah iyo ku habboon yahay in tijaabo dabiiciga ah cilmibaadhaha ogyahay habka loo marayo taas oo daaweyn loo xil saaray oo uu aaminsan yahay inay noqon random.
Fikradda ah barbardhigo cadaalad in dhiiriyo doonayeen in ay sameeyaan tijaabo kale oo caddeynayaa labada habab kale: tijaabo dabiiciga ah iyo ku habboon. Qaababkaasi waxay awood kuu siinaysaa in la qiyaaso saamaynta sababaha ka data lahaayeen arkay by ogaadeen barbardhigo cadaalad ah gudaha xogta ah in aad horey u fadhiyey.